परम्परागत बजेट ल्याइएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी | रक्त न्युज
परम्परागत बजेट ल्याइएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी
काठमाडौं। सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को बजेट परम्परागत रहेको तथा यसमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन्। बजेटमा राखिएका आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनीहरुको टिप्पणी छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। जसमा ७ प्रतिशतको अर्थिक बृद्धि र सोही बराबरको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्र्तक्रिया (वेबिनार)मा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा पनि बजेट परम्परागत र बढी महत्वाकांक्षी भएर ल्याइएको बताएका हुन्। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको बताए। शिक्षा स्वाथ्य क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुणात्मक परिवर्तन, संकट समाधान नयाँ सम्भावनाका लागि परम्परागत बजेटबाट सम्भव नहुने बताए। अर्थमन्त्रीको बजेटलाई दिशाहीनको संज्ञा दिँदै उनले न समाजवादउन्मुख न बजारउन्मुख केबल बीचमा आएको बताए।
“प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बजेट पनि बढाइएको छ तर विगतमा जसरी हेलमेट लगाएर झार उखेल्ने काम भयो भने न त लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ त सरकारका ढुकुटी नै बच्छ, यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सोचर मात्रै ल्याइनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ यसलाई बढाएर ६०-६५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, कठिन अवस्थामा ऋण लिन पनि डराउनु हुँदैन।” सरकारले वेरोजगारी समस्या हल गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको र ल्याएको पनि छरिएको उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे। रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वन गर्न सकिने अवस्था नरएको उनको भनाइ छ। बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र भविष्यका पिंढीलाई दिशा दिन सफल नरहेको उनले बताए।
आन्तरिक ऋणको लक्ष्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, “विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजागारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।” उनका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि अवस्था जटिल बनाउँदै गएको छ। सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्, अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनले बताए। सरकारले कर्पाोरेट कर नघटाएको, विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधानमा भन्सार बढाउनु उचित नभएको महतको भनाइ छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको अवस्था, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै बजेट ल्याइएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे। साधारण खर्चमा भएको कटौती सकारात्मक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा स्वाथ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइनु सकारात्मक भए पनि अस्पताल निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन उक्त अस्पतालमा डाक्टरहरु बस्न सक्ने अवस्था गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सरकारले सकारात्मक कदम चालेको भन्द कृषि क्षेत्रमा बजेट बढेको बताए। यद्यपि, आगामी वर्षको बजेटमा झन्डै ९ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको र यसबाट चालू खर्च धान्न मुस्किल हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले वैदेशिक सहायताको अपेक्षा ठूलो राखेको तर विगतको अभ्यासले त्यति राम्रो नदेखाएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले कोरोनाका कठिन अवस्थामा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनी भन्छन्, “यो लक्ष्य सामान्य अवस्थाका लागि मात्रै उचित हो” अर्कोतर्फ साढे ७ लाख संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। विभिन्न शिर्षकमा छरिएका रकमलाई एकै ठाउँमा ल्याई ४-५ वटा बैंकबाट नगरपालिक वा गाउँपालिकाको अपनत्व रहने गरी सीप भएका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरेको भए बढी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरुले बताएका छन्। राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न असम्भव रहेको बताए। अहिले परिस्थितीमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ। “हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कममात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ,” डा शर्माले भने, “अर्कातर्फ उद्योगधन्दा ठप्प छ्न्, रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य महात्वांक्षी नै हो।”
अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले वर्तमान कोभिडको विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त साइजका बजेट आएको बताए। यो बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको बताएका छन्। बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो। तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टीमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन्। अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ।
यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरुले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए। जीडीपीको २-३ प्रतिशत घाटामा गइसकेको, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य ४ वटा सुझाव दिएको थियो। गोल्छाका अनुसार जसमा तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय थिए। जसमा सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको उनले बताए। सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिकहरु काममा आउन नचाहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले काममा आउनेलाई शतप्रतिशत र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्दै आएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टीमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टीमुलसभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशत मात्रै स्टीमुलस प्याकेन रहेको उनले बताए। बजेटमा २२५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकोले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुन्छ भने अर्कोतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवाल बताउँछन्। समग्रमा बजेट कार्यन्वयमा चुनौती भएको उनको बुझाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ , आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताएका छन्। सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपुर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
अघिल्लो लेखमाविदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
अर्को लेखमाआपत्तिजनक लेखबारे – रतन भण्डारी